Kutonhorera Kutonhorera neakareruka Sketches uye Ruvara pfungwa kubva Colour Picker Turu - Scantegrity
Kutonhorera Kutonhorera neakareruka Sketches uye Ruvara pfungwa kubva Colour Picker Turu
Pasi pasina art iri eh!, Uye kupenda ndeimwe yeunyanzvi hwandaida. Imi mose munoziva kuti chikamu chakaomesesa kupenda kutanga. Mune ino kesi, iwe ungangofanira kutsvaga inotonhorera machira kana kunyange nyore machira ekupenda kutanga. Zvakanaka, zvakanaka kana iwe ukatarisa boka rezvidhori zvakanaka zvingave zvakanaka mazano ako anotevera ekupenda. Iwe unoona kune boka rejira rekupenda raunogona kuisa. Pasina kutaura, zvakanaka kuti tishandise kupenda ne twist.
Nenzira, chinyorwa ichi chinokuratidza boka rezvidimbu zvekudhirowa kubva kubva kutonhora kunotonhorera kune iwo akapusa. Ehe, iwe unogona kuzvishandisa pane chero zvigadziko zvekudhirowa. Chokwadi, kupenda kwakaita sekutora pikicha. Ivo vaviri vane chinangwa chimwe chete ndechekugadzira mufananidzo unokwanisa kutaurira nyaya. Iwe unogona kugadzira iyo nyaya pane canvas munhu kana kunyange pane yekufungidzira mamiriro.
Chii Chaunoziva nezve Paira?
Zvakanaka, kupenda chikamu chehunyanzvi. Paunonzwa nezve pendi, iwe unofanirwa kuyeuka bursh, pendi, palette banga, chipanje, uye airbrush zvakare. Ehezve, kupenda ndiko mhedzisiro yechiito uye pendi iri chinhu.
Hapana dout, iwe unogona kutaura kuti pendi inoonekwa senge hunyanzvi seyichienderana nechimiro chayo kwete maitiro ayo kana maitiro. Ehe, grafiti art uye mafuta pendi mhando mbiri dzependi. Iwe unoona, arcylic pendi ndeyechiso chechizvino chejira yekupenda. Saka, kana iwe uchida kugadzira chimwe chinhu chemazuva ano, acrylic tehnique zvakanaka kushandisa.
Ndeapi ari 32 Paira Tehcnique Type?
Uye, ndeapi mafashoni ePendi?
Kune rumwe ruzivo, kune maviri marudzi emapendi ekupenda iwe unofanirwa kuziva. Iyo fitness imwe ndeyekumadokero chimiro uye yechipiri ndeya yekumabvazuva maitiro. First yezvose, heino runyorwa rwekumadokero masitendi pakupenda:
figantativism / yekufananidzira Art
Art Deco – mifananidzo yekuona, kuvaka uye dhizaini
Art Nouveau – akafuridzirwa nemhando
Zvichakadaro, iwo easter maitiro ekupenda ndeaya:
Indian pendi: Tanjore, Mughal, Rajasthani uye Pattachitra
Shandisa Colour Picker Kuti Uwane Rakafemerwa
Vangani vako iwe vanogumburwa nekushandisa iwo iwo iwo iwo mavara pende rako? Zvakanaka, iwe ungafanira kuziva kuti iyo inotora mavara inogona kukupa iwe anopfuura mamirioni 1,8 emavara mazano. Ndinoreva, kana iwe ukaona pikicha, unogona kuwana ruvara urwo rwaunoda kuisa pendi yako. Asi, chii chinoitika kana ukatadza kudana ruvara rwaunoda kushandisa? Iwe unozovhiringidzika!
Nenzira, kana iwe ukashandisa iyo ruvara inotora, iwe unozoziva rondedzero yemavara emukati mukati mufananidzo, mufananidzo, kana pikicha. Kune ruzivo, chishandiso chiri nyore kushandisa uye icho chichagara kweinenge miniti imwe. Iwe unongo fanirwa kugadzirira iwo mufananidzo waunoda kuongorora iwo mavara uye iwe unowana iwo maficha emufananidzo. Imwe yeruzivo iwe yaunowana izita reruvara, iyo RGB, uye HEX zvakare. Ichi chishandiso chakanaka, handizvo here?
Mashandisiro Ekuita Ruvara Picker?
Zvinoita sekunge iwe hausi kumirira kushandisa iyo mavara. Nekudaro, pasina imwezve yakakodzera nekuda, iwe unogona kuongorora matanho akateedzeredzwa ekushandisa iyo inotora mavara. Apa chienda!
Nhanho 1: Tora mufananidzo, Mufananidzo, kana Photograph pane yako Chida
Chekutanga chinhu chekutanga, iwe unofanirwa kuwana mufananidzo, pikicha, kana chaunodaidza semufananidzo pane yako kifaa. Ehe, iwe unogona kuitora kubva internet. Kunze kwezvo, iwe unogona zvakare kuitisa pane imwe sosi. Kana iwe uine kamera, iwe unogona zvakare kutora mufananidzo wechinhu yacho zvakananga.
Nhanho yechipiri: Isa iyo Image, Mufananidzo, kana Photograph pane Colour Picker Tool
Kana iwe ukaona, chishandiso chinotevera chinokupa iwe nzvimbo yekuisa iyo pikicha. Zvakanaka, iwe unofanirwa kutora iwo mufananidzo chaiwo, mufananidzo, kana pikicha.
Nhanho 3: Isa Imwe Tsananguro yeMufananidzo
Mushure mekupeta iyo pikicha, iwe unofanirwa kuwedzera imwe tsananguro. Nenzira, iwe unongofanira kuisa mazwi mana kuti upedze iyo shamba.
Nhanho yechina: Dzvanya “Kutumira” Bhatani
Uye, iwe unogona baya pane bhatani rekutumira kuti uenderere mberi kune chinotevera chinhanho.
Nhanho yechishanu: Ongorora Zvakabuda paiyo Mutsetse Weruvara
Pakupedzisira! Wapa mufananidzo. Iye zvino, pachave nemamwe mavara anoonekwa pane iyo skrini. Ehe, iwe uchakwanisa kuona zvimwe zvemhando senge HEX, RGB, uye zita remakara. Iwe unogona kudzokorora matanho uchishandisa akasiyana mifananidzo, mifananidzo, kana mafoto kuti uwane mavara matsva. Nakidzwa!
Iwe unoona, iwo pikicha wawakakanda une mavara akasiyana siyana.
Iye zvino, unogona kuisa iwo mavara kune ako pendi mazano.